စားပြီးထွေးထုတ်..သူတို့ အလုပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စားပြီးထွေးထုတ်..သူတို့ အလုပ်
Posted by amatmin on Oct 21, 2011 in Creative Writing, Critic | 29 comments
အခုလာတာကလည်းသူ့ကောင်မလေးနဲ့ပက်သက်ပြီး တိုင်ပင်ချင်လို့ပါ ပေါ့..ဒါနဲ့ပဲ.ဟကောင်ရ
အခုဟာက ဒင်းတို့နှစ်ယောက်.ကဲချင်တိုင်းကဲ.ဖြစ်သလိုနေလာကြပြီး. နောက်လူတိုးမဲ့ပြသာနာပေါ်နေလို့..
သူတို့ကလဲ မယူချင်သေးကြဘူးဆိုတော့.အဲဒါကို ဘယ်လိုရှင်းရင်ကောင်းမလဲလို့
အမှန်တော့ သူ့အသက်အရွယ်.နဲ့ ငွေကြေးပိုင်းအရဆိုရင်လည်း.ယူမယ်ဆိုယူသင့်သလို
အဲဒီမှာ သူတို့ဘက်က ဘယ်လိုစကားတွေထွက်လာလဲဆိုတော့.တခြားသူငယ်ချင်းတွေတုန်းကလည်း..
(နှစ်ယောက်.သုံးယောက်မကဘူးနော်).. သူပြောတဲ့သူငယ်ချင်းဆိုတာတွေက လည်းကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်တဲ့
သူငယ်ချင်းတွေပါ ပဲ..အပေါင်အအသင်းတွေကြားမှာတော့ ပုံမှန်အားဖြင့်
သူတို့တွေပြောပုံက ဒီလုပ်ရပ်ကို တကယ့်ကိုမလွှဲသာလို့ လုပ်လိုက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့
အမြင်တောင်မရှိနိုင်ကြတော့ဘဲ..ဒီအခက်အခဲကို ဒီလိုပဲဖြေရှင်းရမှာပဲဆိုတဲ့ သာမန်
သူတို့အစားကျွန်တော့.ရင်လေးသွားတယ်..ဘာဖြစ်လို့ ဒီလုပ်ရပ်ကိုကျတော့..အပြစ်တခုလို့ မမြင်နိုင်ကြတာလဲ..
သူတို့တွေနေချင်သလိုနေ ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်ပြီး ရလာတဲ့အကျိုးဆက်ကိုရင်မဆိုင်ရဲ ကြရင်
အခုတော့ကြားထဲက အပြစ်မရှိတဲ့ လူမှန်းတောင်မသိတတ်သေးတဲ့.သူတို့လေးတွေ
အခုခေတ် လူငယ်တွေ က ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာနေလွန်းအားကြီးပြီ ဆိုတော့
လိင်ဆက်ဆံတဲ့ နေရာမှာ ကွန်ဒုံးသုံးရင်သုံး (ဒါမှမဟုတ်)
တားဆေး သောက်ရင်သောက် ၊ ထိုးချင်ထိုး စသဖြင့်
စနစ်တကျ ပညာပေးဖို့ အစီအစဉ်တွေ လိုအပ်နေပြီလို့ ထင်ပါတယ်
အမတ်မင်း ပြောသလို အဖြစ်တွေကတော့ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်
အသိတွေထဲမှာကို ၃ လလောက်ရောက်မှ မလိုချင်ဘူး ဆိုပြီး
ဖျက်ပစ်တာမျိုးလည်း တွေ့ ခဲ့ဖူးတယ်
အရမ်းအန္တရာယ် ရှိတဲ့ အလုပ်ပါဗျာ
ဒီပို့စ် ကိုတင်တုန်းလျှောက်.Tags လိုက်တာ.အဲလိုမျိုး.တခြားပို့စ်တွေအောက်ရောက်သွားတယ် ထင်တယ်..
အခုရေးထားတဲ့ ပိုစ့်အောက်က Edit this page
ကနေပြင်ရင် ပြင်လို့ ရပါတယ် …..
ဒို့လဲ Edit လုပ်လို့မရပါဘူး။ အောက်ဆုံးမှာအဲဒီစာ Edit this page မပေါ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲတော့မသိ။
အဲဒီကနေလည်း ပြန်လို့ရပါတယ် ကို thit min နဲ့ ကိုamatminရေ ကြိုးစားကြည့်ပါဦးနော် ..
sex education program တွေဒီထက်ပိုပီး ပွင့်လင်းကျယ်ပြန့်လာရင် ဒီလို ပြသနာတွေ တဖြည်းဖြည်း ပပျောက်သွားမယ်လို့တော့ မျှော်လင့်ရတာဘဲ။ မသိမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ပြသနာတွေလို့ယူဆပါတယ်။
လက်မောင်းထဲထည်.တဲ့ဆေးတောင့်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့… ၅ နှစ် ခံ။
သားစပ်ခြားရေးပညာပေး( တချို့NGO ) တွေမှာထည့်ပေးနေတယ် ၅၀၀ ကျပ်ပဲပေး၇တယ်…တဲ့။
ကိုတော်ကာကြီး နဲ့ မရွှေအိ တို့ပြောသလိုပဲ.ကာယကံရှင်တွေကို.
မရခင် ကြိုတား ရလာရင်တော့ ကျေကျေနပ်နပ် လက်သင့်ခံကြရမှာပါ မခံချင်ရင်တော့ မခံကြနဲ့ပေါ့
နိုင်ငံခြားမှာတော့ စနစ်တကျ ဆေးရုံ ဆေးခန်းတွေမှာ ဖျက်ပေးတာရှိတယ်
ဒီမှာ ရှိတယ် ဆိုတာ မကြားမိဘူး ၊ ဖျက်ရင် တရားမ၀င် ဖျက်ရမှာပဲ
အထဲက ကလေးအတွက် ခဏထား မိခင်မှာ အန္တရာယ်ကင်းပါ့ မလား
IMO, the abortion becomes problems in Myanmar because of not only the couples but also our Myanmar traditional environment. I can’t thinkasingle reason why Myanmar people do not respect Single Mother / Father. If we could respect them, they will be willingly to look after their kids without marriages and we can reduce the abortion rate and fatilities.
ဟုတ်ကဲ့ TTCG ပြောသလိုပဲ.ကျွန်တော်တို့ဆီမှာက.မြန်မာ့မျက်စိနဲ့ကြည့် ပြီး
သူကြီးပြောနေကျ..US ကနေ အတုယူရမှာ ဒါတွေလည်းပါမယ်ထင်တယ်..
အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုဖွင့်ထားသော ပညာပေးဆေးခန်းတွင် ဖျက်ပေးသည် ဟု သတင်းကြားဖူးပါသည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး တွင်လည်း ၊ အထူးစုံစမ်း ပါက ဖျက်ပေးသူများရှိသည် ဟု သိရသည် ။ အဲဒီမှာ ၈သောင်းကျပ် ။
ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းကတော့”..”ဘက်မှာ.၁သိန်း၅သောင်းနဲ့ ဈေးတည့်သွားပါကြောင်း..
လူ့အသက်တစ်ချောင်း ဆိုတော့ အဖန်ငါးရာငါးကမ္ဘာ တဲ့၊
ကိုယ့်အသက် ကိုယ်သတ်မှမဟုတ်လား.. အဖန်ငါးရာငါးကမ္ဘာဆိုတာ..
သင့်တာတွေ မသင့်တာတွေ ထားလို့…..
ဆေးရုံမှာ စံနစ်တကျဖျက်ရင် အန္တရာယ်လဲ အလွန်နည်းပြီး ငွေကြေးကုန်ကျမှုလဲ သိပ်မများနိုင်ပါဘူး။
ဒီပိုစ့်လေးဖတ်မိရင် ဆေးဘက်အမြင်လေး ပြောပါဦး။
ယူအက်စ်လို..လစ်ဘရယ်တော်တော်များတဲ့နိုင်ငံတောင်.. အဘိုးရှင်း(ဖျက်ချ)ကိစ္စက.. လွှတ်တော်ထဲ..အိမ်ဖြူတော်အထိ.. အကြိတ်အနယ်ပဲ..။
မြန်မာပြည်လို. .စူပါကွန်ဆာဗေးတစ်တွေရဲ့တိုင်းပြည်.. ဥပဒေကိစ္စ.. အင်မတန်ခက်မယ်ထင်မိတယ်..။
ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ အဲ့ဒါဆိုးတာ … မီဒီယာတွေက ၊ စာအုပ်တွေ ၊ ကျန်းမာရေး စာဆောင်တွေကနေ ကိုယ်ဝန်မရအောင် ဘယ်လို ပြုမူနေထိုင်သင့်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေ အလျဉ်းသင့်သလို ဖော်ပြနေပါလျှက် ကိုယ်တိုင်က မလိုက်နာမိပဲ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုး ကိုယ်ဝန်ရသွားတတ်တယ် … ။ တကယ်ဆို … အဲ့ဒီကိစ္စတွေမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလျှင်တောင် ကာကွယ်ဖို့ ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပါ … ကျွန်မရေးခဲ့ဖူးပါတယ် … ။
http://myanmargazette.net/55483/health-fitness (မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ရစရာရှိပါ့မလား ) ဆိုတဲ့ပို့စ်မှာ ကာကွယ်နည်းတချို့ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ် … ။
ဒီနိုင်ငံမှာက အဲ့ဒီလိုပညာပေးတွေ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်လုပ်သင့်သလောက် မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ် … တဖက်က လူငယ်တွေ အရွယ်မတိုင်ခင် လိင်ကိစ္စ စိတ်ဝင်စားမှုများလာမှာ စိုးတာရယ် … မသမာသူတို့ရဲ့စိတ်တွေ နှိုးဆော်သလိုဖြစ်မှာရယ်တွေကြောင့်ပါ … ။
လူသားမို့ ဒီလိုကိစ္စတွေ ရှောင်လွဲမရသော်လည်း …. ကာကွယ်နည်းလေးတွေ သိထားလျှင် ထိုက်သင့်သလောက် ရှောင်လွဲနိုင်မှာပါ … ။ တကယ်လို့များ မတော်တဆ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့လျှင်တောင် … မွေးရဲတဲ့သတ္တိနဲ့(အတော်တော့ ..စွန့်စားရမယ်…) မွေးဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ် … ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ single mother ဆိုတာ ..ခေတ်မစားပေမယ့်…တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ … ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား … ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ခွင့်ရှိတယ် … အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကို… အောက်ကလင့်မှာ ရေးထားဖူးတယ် … ။
http://myanmargazette.net/52602/health-fitness (အိမ်ထောင်မပြုခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း နှင့် လူအများလက်ခံထားသည့် ယဉ်ကျေးမှူ့ အမူကျင့် )
ဟင်းးးးးးးး အဲလိုအဖြစ်တွေမဖြစ်သင့်တော့ပါဘူး။ ကျန်းမာေ၇းရှု့ထောင့်ကပဲကြည့်ကြည့်၊
လူမူ့ေ၇းရှု့ထောင့်ကနေပဲကြည့်ကြည့် ဘယ်လို့မှလက်ခံနိုင်စ၇ာမရှိပါဘူး။ မနေနိုင်လို့ပဲ ကဲကြမယ်ဆို၇င်တောင် ၊ မကဲခင် ဒီလိုကိစ္စဖြစ်မလာအောင် ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်မလဲကို အ၇င် စဉ်းစား ကြဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဟိုဟာပြုနေတုန်းကတော့ နှစ်ယောက်တည်းကမ္ဘာပေါ့နော်။ နောက်တော့ မဖုံးနိုင်၊ မဖိနိုင်၊ မရှူနိုင်၊မကယ်နိုင်ဖြစ်မှ မလုပ်သင့်တာတွေ
လုပ် အကုန်လျှောက်လုပ်ကုန်ကော။ ဘာမှမပြစ်မရှိတဲ့ လူသားတစ်ယောက်ကို လူလောကထဲမှာတောင် မေ၇ာက်ခင်မှာ သတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ တော်တော်ကိုလူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်မဟုတ်ဘူးလားဗျာ။
အမှားတစ်စုံတစ်၇ာများပါသွား၇င် ဦးညွှတ်ပြီးအ၇င်ဦးစွာ တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ…..။
လူကို လူလို တန်ဘိုးမထားကြတာနေမယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ။
ဖြစ်ခဲလှတဲ့ လူ့ ဘ၀တဲ့။
အဲဒီ အထဲမှာက မြင့်မြတ်လှတဲ့ ယောကျာင်္း ဘ၀တဲ့။
လက်တွေ့ ကတော့ လူမွေး လူထွက် ခွေးမွေး ခွေးထွက်နေတာပါပဲ။
အီးဒုံး ပြောတဲ့ Single Mother ဆိုတာမျိုးကတော့ ကျုပ်တို့ သေပြီး နောက် ၅ ဆက်လောက်ထိ
ဖက်ရှင် အနေနဲ့ Single Mother လုပ်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ အကြောင်းကြောင်းနဲ့ဖြစ်သွား
ဒါနဲ့ ပါတ်သပ်ပြီး ပြောရရင် ယောကျာင်္းဆိုတဲ့ ကောင်တွေက သဒေါင်းဇား အစာဝတော့ ×ီးေTာင် ဆိုတဲ့
ကောင်စားတွေဗျ။ ကျုပ်လဲ အပါအ၀င်ပဲ။ အဲ…ခင်ဗျားတို့ နဲ့ကွာခြားနိုင်တာ တစ်ချက်က ကျုပ်ဟာ
ချွတ်လိုက်တဲ့ အတွင်းခံကို ပြန်ဝတ်ပေးတတ်တယ် ဆိုတာပဲ။ အကာအကွယ် ဘာညာသာ ပြောနေတာ
မိန်းကလေးက ယောကျာင်္းလေးကို အဲဒီ အချိန်မှာ ဘာမှ မလွန်ဆန်နိုင်တော့ဘူးဗျ။ ဒါက အပြစ်ပြောလို့ 
မရဘူး။ ဒါဟာ သဘာဝပဲ။ အဲဒီ အချိန် မတိုင်ခင်ကရယ် တိုင်ပြီးမှပဲ ဗိုက်ကြီးမှာကို ကြောက်ကြတယ်။
ဒီတော့ ဆင်ခြင်ရမှာ ကိုယ်ချင်းစာရမှာက ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ လို အစာဝတဲ့ သဒေါင်းဇားတွေပဲ။
အရသာ ကောင်းချင်ရင် ကွန်ဒုံး ပါးပါးလေးတွေရှိတယ်။ ဖင်ခေါင်းကျယ်ပြီး လူနဲ့ လက်နက်နဲ့ မမျှအောင်
ယူရောပ်ပီယန် ဆိုက်ဇ် တွေ ၀ယ်သုံးပြီး ချောင်သလေး ပြုသလေး ကမ္ဘာခြားသလေး မလုပ်နဲ့ ။
သူတို့ ခင်မျာ သဘာဝကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့မောင့်သဘော လုပ်တဲ့ဟာကို ခင်ဗျားတို့ က ငါ့ဘို့ ပဲကြည့်
လို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေကြတာ။ တာဝန် အရှိဆုံးက သူတို့ တွေ မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ တွေပဲ။
မိုးကာ မခြုံပဲ ရေချိုးတယ်။ ပြီးရင် နှာစေးမှာ စိုးလို့ဆေးလေး တိုက်လိုက်တယ် ဟုတ်စ ???
ဈေးက သူတို့ ရဲ့ဟော်မုန်းတွေကို ကဗျောင်းကဗြန် ဖြစ်စေတယ်။ ခင်ဗျား တကယ်ယူမည့် မိန်းမဆိုရင်
ကလေးယူချင်တဲ့ အခါ နားကားမယ်။
ဆိုတော့…သဒေါင်းစား အစာဝရင် ကြိုက်သလိုလုပ်ပါ ။ ဒါပေမဲ့ …ကွန်ဒုံးကို သုံးစွဲပါဗျား။
ကွန်ဒုံးသုံးလဲ သူလဲကောင်း ခင်ဗျားလဲ ကောင်းပါတယ်။
ဥပမာ.ဆိုရင်ကျွန်တော်.အဖေဆိုရင်.၁၀ တန်းအောင်တဲ့နှစ်မှာပဲ ကွန်ဒုံးလိုအပ်တဲ့သဘောတရားတွေကို.ကျွန်တော့ကိုရှင်းပြပေးခဲ့တယ်..
ဈေးက မဟုတ်ပါ။ ဆေးက လို့ ပြင်ဖတ်ပါ။
ဆြာ က သူကောင်းတာလဲ သိနေတယ်လား
ဆြာ ပြောပြချက်တွေက ထိထိမိမိ ကောင်းပါတယ်
ဟတ်ထိ တဲ့ စကားတွေပါ
ဟုတ်တယ် အနော်တို့ တွေက တာဝန်အရှိဆုံးပါ…။
သဂျီးကတော့ ဒီလိုမျိုးဆိုရင် လွှတ်တော်ထဲတိုင်ဖို့ ပြောလေ့ရှိတယ်။ (သူ့ခင်ဗျာလဲ မြန်မာပြည်က ကျောက်တွင်းတွေကို ကြည့်ရသေးသကိုး) ဒါကြောင့် သဂျီးအလိုတော်ကျ ပြောပါ့မယ်။ အမတ်မင်းရယ် လွှတ်တော်မှာ တင်ပြပေးပါ။ နိုင်ငံရေးကိစ္စမဟုတ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆွေးနွေးပေးနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်..။